မသေချာမရေရာ crypto စျေးကွက်ချုပ်ကိုင်ထားအဖြစ် Altcoins Bitcoin စျေးနှုန်းရဲ့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ - Token Myanmar
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ Cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရင်ဆိုင်နေရသည် တစ်လကျော်များအတွက်စိန်ခေါ်မှုအချိန် စျေးကွက်အတွင်းထင်ရှားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုလုံးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးသောမကြုံစဖူးသောစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဇွန်လ၏အစကတည်းက, ဒီအတော်လေးအခြေတည်စအာကာသ၏စုစုပေါင်းစျေးကွက်အရင်းအနှီးရှိပါတယ် နှစ် ဒေါ်လာ ၁.၈ ထရီလီယံကျော်မှဒေါ်လာ ၁.၃ ထရီလီယံအထိ၊ ၄၀% ကျော်ဆုံးရှုံးမှုကိုပြသသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုမှာ Bitcoin သည်စျေးကွက်ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းလက္ခဏာများပြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။BTC) အီနှင့်ခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုကိုဆက်လက်ပြသခဲ့သည် (ETH) နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကျယ်ပြန် altcoin စျေးကွက်။ ဤအချက်အပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြရန်, က ETH နှင့်အတူ BTC ရဲ့ဆက်စပ်မှုကိုနောက်ဆုံးရက်ပေါင်း 30 ကျော် 0.8 အမှတ်အသားနှင့်နီးစပ်ပျံဝဲဆက်လက်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဤကိန်းဂဏန်းများသည်မည်သည့်အရာကိုကိုယ်စားပြုသည်ကိုပိုမိုနားလည်စေရန် ၀ နှင့် ၀.၃ အကြားရှိတန်ဖိုးများသည်ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ခုအကြားဆက်စပ်မှုမရှိသလောက်နည်းပါးသည်၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောမက်ထရစ်သည် ၀.၅ အမှတ်အသားကိုဖြတ်ကျော်သွားသည်နှင့်၎င်းသည်တန်ဖိုးမြင့်မားသောမှီခိုအားထားရာနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၀.၅ မှ ၀.၇ အကြားရှိတန်ဖိုးများသည်အလယ်အလတ်ဆက်စပ်မှုကိုကိုယ်စားပြုပြီး ၀.၈ အထက်ရှိသူများသည်အလွန်မြင့်မားသောငွေကြေးဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်။
ဒီတော့ဒီဆက်စပ်မှု cryptocurrency စျေးကွက်နှင့်ဒင်္ဂါးပြားကိုင်ဆောင်သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်သောသူတို့အဘို့ဆိုးရွားလား? လီယိုရှန်သည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောချေးငွေလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ C.R.E.A.M. ဘဏ္TCာရေး, intပြီလကတည်းက, Ether နှင့်အခြား altcoins ၏အိမ်ရှင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency နှင့်ဆက်စပ်။ တန်ဖိုးကိုအများကြီးရရှိခဲ့ကြပြီ BTC အမြဲတမ်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ crypto ရှုခင်းကိုဖြတ်ပြီးအပြင်းထန်ဆုံး, အလုံခြုံဆုံးတန်ဖိုးကိုစတိုးဆိုင်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီးနေစဉ် Cointelegraph သူကထပ်ပြောသည်။
"ဒီပြန်လည်ဆုတ်ခွာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ရန်ပုံငွေများကိုပြန် BTC သို့စီးဆင်းကြည့်ဖို့အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Altcoins သမိုင်းကြောင်းအမြင့်မားဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့် ETH ရဲ့ ဦး ဆောင်လိုက်နာပါပြီ။ ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်းလူအများစုအတွက်အံ့အားသင့်စေခြင်းမှာ 'ကုန်ထုတ်စွမ်းအား' ဇာတ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားသော memecoins သည် DeFi တိုကင်များထက်သာလွန်သည်။
ထပ်မံ၍ Cheng ကစျေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုအပြင် crypto market နှင့်ဆက်စပ်သည့်မွေးစားခြင်းမက်ထရစ်အမျိုးမျိုး၊ network အသုံးပြုမှု၊ network လုပ်ဆောင်မှုစသည်တို့သည်အချိန်ကုန်ဆုံးနှုန်းများကိုဆက်လက်မြင့်တက်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ "crypto အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုရပ်တန့်ကြပြီမဟုတ်။ စျေးကွက်ကဆုတ်ခွာမှုကဆူညံသံကိုလျှော့ချပေးပြီးတည်ဆောက်သူများအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပြုလုပ်ရန်နေရာပေးသည်။
အလားတူစွာ၊ Nexo ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပလက်ဖောင်း၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Antoni Trenchev ကနောက်ဆုံးပေါ်ဇာတ်လမ်းတွဲသည် Cointelegraph သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ crypto နှင့်အတူတရုတ်ရဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အမုန်းတရားဆက်ဆံရေး သာစျေးကွက်၏ကျန်များအတွက်အချဉ်ပုံစံကိုသတ်မှတ်ထားရန်, Bitcoin ရဲ့စျေးနှုန်းအတွက်ချိုကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ သူကထပ်ပြောသည်။
"ဒီလိုသတင်းမျိုးဖြစ်လာပြီး Bitcoin တုံ့ပြန်တဲ့အခါ၊ များသောအားဖြင့်ပိုမိုကျယ်ပြန်တဲ့ crypto asset စကြဝuniverseာအတွက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီး၎င်းသည် DeFi နွေရာသီအတွင်းအဆတိုးတက်မှုနှင့်ကြုံတွေ့ရသော DeFi စီမံကိန်းများဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Trenchev သည်ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းတိုးမြှင့်ဆက်လက် မေလစံချိန်တင်မြင့်ပြီးတဲ့နောက်သူက cryptocurrencies ဒီနှစ်အစောပိုင်းကစျေးကွက်၏အထွတ်အထိပ်ကဲ့သို့ altcoins နှင့်အတူ Bitcoin ရဲ့ဆက်စပ်မှုအတွက်အသစ်ပြန်လည်ကျဆင်းမှုသို့ဘာသာပြန်ဆိုနိုင် "ဟုပြောသည်, ဒီနှစ်ကတခြားပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းထက်သာလွန်မှမျှော်လင့်ထား။ "
Bitcoin သည် crypto ဈေးကွက်ကို ဦး ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်
Bitcoin ၏တန်ဖိုးများသိသိသာသာမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှစျေးကွက်သည်ကြီးမားလာသည်ကိုငြင်းဆိုစရာမရှိပါ။ အကြောင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် BTC အတွက်အကောင်းမြင်အမြင်ရှိပါက၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အခြား altcoins များသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။
သူကပြောပါတယ်, က FUD နှင့်ရေတိုရေရှည်မတည်ငြိမ်မှုများကဲ့သို့သောအရာတို့ကိုကဏ္ sector ၏ငွေကြေးအရှိန်အဟုန်အဆုံးအဖြတ်အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ playing နှင့်အတူမည်သူမဆိုရဲ့အရိုးဆုံးစိတ်ကူးစိတ်သန်းထက်ကျော်လွန်သောထုံးစံ၌ crypto စျေးကွက်လည်ပတ်ကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်သက်သေပြလျက်ရှိသည်။
ဆက်စပ်: ရာထူးပူးပေါင်း: ရွှေနှင့်စတော့ရှယ်ယာနှင့်အတူ Bitcoin ရဲ့ဆက်စပ်မှုကြီးထွားလာနေပါတယ်
Winston, အလိုအလျောက်အထွက်နှုန်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး protocol ကို Harvest ဘဏ္forာရေးအဘို့အကလောင်အမည်ကိုအလယ်အလတ်, Bitcoin ရဲ့ကြီးစိုးမေလ 18 ရက်နေ့တွင်အနိမ့်ကတည်းက, အဓိက altcoins ရုံသွေးထွက်သံယိုခဲ့ကြဟုဆိုသည်, တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားမှန်ဘီလူးမှတဆင့်အမှုအရာကြည့်ဖို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သူက
"အများစုကအတူတကွအတူတကွရွှေ့သွားကြသည်; ပေမယ့်, အချို့သောဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်အမြဲရှိပါတယ်။ ဒီမသေချာမရေရာမှုအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါလူအများအပြားဟာလက်ရှိတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများနှင့် stabilcoin ခြံများမှာခိုလှုံနေကြသည်။
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ DeFi ပလက်ဖောင်း Furucombo ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ် Blake Ho ကထိုကဲ့သို့မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ကွဲပြားခြားနားစေရန်အတွက် Bitcoin, Ether မှလွဲ၍ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားပြန်လည်ခြေလှမ်းပြန်လှမ်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည် သူတို့ရဲ့ portfolios ။ "ချေးငွေအထွက်နှုန်းအတွက်တည်ငြိမ်တဲ့ငွေတွေကိုရန်ပုံငွေတချို့ချထားတာ၊ ရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက်ကတိကဝတ်စီမံကိန်းတွေအတွက်ခွဲဝေချထားတာတွေကတစ်ခုလုံးရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်။ "
နောက်ကျော ၂၀၂၀ တွင်ထင်ရှားသော altcoins အချို့ ပြသခဲ့သည် အခြေခံအားဖြင့် Bitcoin မြင့်တက်သို့မဟုတ်နှစ်ပြီးသောအခါ, ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်လုပ်ခဲ့တယ်ကြောင်းအကြံပြု, အခြေခံအားဖြင့် 0,91 ပိုလျှံအတွက် BTC ဆက်စပ်မှုတန်ဖိုးများ။ ဤလမ်းကြောင်းသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော်လည်း ၂၀၂၁ အစတွင်အရာရာပြောင်းလဲလာသည်။
သာဓကအားဖြင့်၊ ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဤဆက်စပ်မှုနှုန်းသည် ၀.၈ အမှတ်အသားကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့် altcoins အမြောက်အများသည်တန်ဖိုးကြီးမားစွာတိုးများလာခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ ETH (အခြားထိပ်တန်း altcoins များနှင့်အတူ) သည် BTC နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် bull ပြေးစဉ်အတွင်းပိုမိုမြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းရရှိစေသည်။ ဤသည်အီန်းကျင် 150% ၏ Bitcoin ရဲ့ပြန်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နီးပါး 600% ၏အကျိုးအမြတ်တခုကိုပြသနိုင်ခဲ့သည့်အခါယခုနှစ်အစောပိုင်းကနွားစျေးကွက်အတွင်းအထူးသဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် Bitcoin သည်အခြားနွားလားစီးလျှင်သွားသည်ဆိုသောအချက်သည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လိမ့်မည်။ BTC မြင့်တက်လာပါက altcoin စျေးကွက်သည်တိုးတက်လာလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းထိုကြီးမားသော altcoins အချို့သည်ပြိုကွဲသွားခြင်းရှိ၊ မရှိဆိုတာကိုကြည့်ရကျိုးနပ်သည့်မေးခွန်းမှာ – ETH သည် ၄၄၀၀ ဒေါ်လာ၏ ၄ င်း၏ All-time အမြင့်ဆုံးအထိတက်ခဲ့သည့်နည်းတူ – Bitcoin မှနှင့်လာမည့်လများတွင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္financialာရေးဝိသေသလက္ခဏာကိုဖောက်လုပ်။